‘बिरामीको पीडामा हामी पनि छट्पटिन्छौं, मिल्ने भए आफ्नै प्राण दिएर बचाउँ जस्तो हुन्छ’ – Nepal Press
२०७८ असार ४ गते १०:३३
कर्मथलो पुग्छु जब, हासो कतै देखिँदैन
पीडा व्यथाभन्दा अरू, कहीँ कतै भेटिँदैन ।।
ढुङ्गा होइन मेरो मन, दुख्छ घरिघरि
जता हे¥यो त्यतै देख्छु , डर वरिपरि ।।
अग्रभागको सिपाही हुँ, लड्न जानु पर्छ
हाम्रा साझा शत्रुलाई , मिली जित्नु पर्छ ।।
यी हरफहरू गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजबिराजका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रन्जित झाका हुन् । कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खट्दा बिरामीको पीडासँग खेल्दा उनका मनमा उर्लेका भावनालाई कवितामा उतारेका छन् । उनले डायरीमा व्यक्त गरेका भावना समाचारका लागि अन्तर्वार्ताकै क्रममा सुनाए् । कोरोना सङक्रमितहरूले अस्पतालका बेडमा स्वास फेर्न नसकेर छटपटिएका पीडा अनुभूतिको प्रतिविम्व हो यो कविता ।
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो भेरियन्टले बिरामीहरुलाई मात्र पीडा र छटपटी बनाएको छैन, उपचारमा संलग्न चिकित्सकको मन पनि यसरी नै छिया-छिया पारेको छ । डा. झा भन्छन, ‘आफ्नै सहकर्मी गुमाउनु पर्दा होस या एकपछि अर्का बिरामीले सदाका लागि आँखा चिम्लिरहँदा आफ्नो कर्मक्षेत्रमा सन्नाटा छाइरहन्छ । भोक, प्यास, निद्रा लाग्दैन ।’
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो भेरियन्ट फैलिन थालेयता झाले अस्पतालको व्यवस्थापनमा २४ घन्टा खट्नु परेको छ । अस्पतालका १५ जना नर्ससँगै दुईजना चिकित्सकलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ । एक सय शय्या क्षमताको अस्पतालमा बिरामी सिकिस्त भएपछि आउँछन् । डाक्टर झाले स्वस्थ्य मानिसमा ९५ भन्दा माथि हुनुपर्ने अक्सिजन लेबल घटेर ५० भन्दा तल झरेपछि बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् । उनले थपे, ‘त्यसैले बिरामी बचाउने हाम्रो लाखांै प्रयास निरर्थक हुन्छ ।’
गजेन्द्रनारायण सिहं अस्पतालमा शय्याको अभाव नभए पनि अक्सिजन, औषधि र जनशक्तिको अभाव छ । ‘अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन । भर्ना भएका अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजनकै सपोर्टमा राख्नु पर्छ,’ डाक्टर झाले थपे, ‘अक्सिजनको ब्यवस्थापन सिलिन्डर फिल गर्न धरानदेखि विराटनगरसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यतिबेलासम्म बिरामी नै ‘एक्पायर’ हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’
कोरोना संक्रमित भएको थाहा हुनेवित्तिकै बिरामीको मनोबल निकै कमजोर बन्ने गरेको डा. झाको अनुभव छ । ‘आत्तिएर अब म बाँच्दिन भनेर बिरामीहरु पहिला नै मनोबल कमजोर बनाएर आउँछन् । मान्छे कोरोना सङ्क्रमणले भन्दा पनि कहिलेकाहीं त डरले नै मरेको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले सुनाए ।
यही साताको एउटा घटना स्मरण गर्दै डाक्टर झाले भने, ‘३५ वर्षीय एकजना युवालाई हामीले बचाउन सकेनौं, बडो पीडा हुन्छ यस्तो घटनाले । आँखा अगाडि एक पछि एक मान्छे मृत्युले ढलेको देख्दा आफैंलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । मिल्ने भएँ, आफ्नै प्राण दिएर बचाउ जस्तो हुन्छ ।’
कोरोना महामारीको समयमा विरामीको उच्च चाप र जनशक्तिको अभावको दुखदायी अवस्था स्वास्थ्यकर्मीले नै सबैभन्दा धेरै ब्यहोरेका छन् । ‘जतिबेलै प्रेसरमा काम गर्नुपर्दा भोक, प्यास र निद्रा नलाग्ने हुँदो रहेछ,’ डा. झाले भने ।
उनले पीडादायी अवस्थाले आफ्नो पेशाप्रति नै वितृष्ण लाग्नेसम्मको अनुभव सुनाए । ‘चारैतिर भयावह अवस्था देख्दा कहिले काही त यस्तो पनि लाग्छ चिकित्सकप्य पेशा नै किन रोजेको होला ?,’ उनले भने, ‘तर फेरि सम्हालिन्छु । गर्व पनि लाग्छ । आज यो कठिन परिस्थितिमा चिकित्सक भनेको के हो ? चिकित्सकको आवश्यकता महत्व के छ भन्ने कुरा मानिसले बुझेका छन् । हजारौं पीडितको ज्यान बचाउन पाएका छौं ।’
कार्यक्षेत्रको भयावह स्थितिको कारण पीडामा रहेका उनीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई परिवारको साथले राहत दिएको छ । पहिलो चरणको महामारीमा श्रीमती र छोराछोरीलाई काठमाडौंमै राखेका डा. झाले यसवर्ष आफूसँगै ल्याए । उनीहरु नै छुट्टिएर बस्न मानेनन् । ‘मैले दुवै डोज खोप लगाइसकेको छु । सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर सँगै बसेका छौं । म अस्पतालमा कोरोना युद्ध लडिरहेको छु, परिवारले साथ दिएको छ । यसले काम गर्ने उर्जा दिँदोरहेछ,’ डा. झाले भने ।
#डा. रञ्जित झा
प्रकाशित: २०७८ असार ४ गते १०:३३